Naanị m zigara Noa $ 1000! | Martech Zone
Naanị m zigara Noa $ 1000!
Sunday, November 25, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndo maka ngwụcha ọsọ na nke a! Anyị zigara ndepụta nke ndenye aha na Ade na ntinye ọ bụla nwere nọmba ọnụọgụ ejikọtara (iji ọrụ RAND na Excel wee dezie kọlụm ahụ). Anyị mechara nwee Hannes họrọ ọnụọgụgụ n'ime ntinye 108 ka Hannes ghara ịma onye mmeri ga-abụ. Onye mmeri nke $ 1,000 na-akwụ ụgwọ bụ Noa na wpstar.com!
Iji kpuchie ụgwọ azụmahịa Paypal, ezigara m Noa $ 1,040 n'ezie! Ekele Noa! Ihe ndi ozo gha abanye n'uzo ha!
Tags: automatticEgwu microdataNdị mmadụ microdataNgwaahịa microdataNgwaahịa microdata nwere ọtụtụ onyinyeụmụazụ twitterfoto youtube
Should Kwesịrị Designhapụ Atụmatụ 2.0 Web?
Yahoo! Chọọ Marketing… Lo Furu M!
Nov 25, 2007 na 5:56 PM
Awe shucks. Ọ bụ ezigbo ọsọ n'agbanyeghị. Daalụ maka ịkwado nnabata ego, Doug!
Nov 25, 2007 na 6:00 PM
Nke a bụ nnukwu ihe ịtụnanya nye m kemgbe m nọ n'ụlọ na-arịa ọrịa ụbọchị niile! Aga m asị na nke a bụ mkpali ịgụ blọgụ gị ọtụtụ oge, mana agụla m akwụkwọ ozi ọ bụla. Daalụ maka ijide nnukwu asọmpi na enwere m olileanya na gị na ndị na-akwado gị nwere obi ụtọ, kwa.
Kinddị ihe a na - enyere m aka ime ka nwunye m tify
Nov 25, 2007 na 7:31 PM
Ekele Noa! Nanị m ezitere gị njikọ maka onyinye ndị ọzọ.
Ọ bụ asọmpi egwuregwu - M na-atụ anya asọmpi gị ọzọ Doug 😉
Nov 30, 2007 na 4:59 AM
Kechioma, kechioma Ihọd! * Kwesịrị * ịgba ọsọ asọmpi na blọọgụ gị, Noa, ma nyefee iPod. 😉
Kedu mgbe a ga-ekwuputa ndị mmeri ndị ọzọ?
Nov 30, 2007 na 9:32 AM
Ihe niile gara na onye mmeri ukwu! Asọmpi ọzọ m ga - enwerịrị ihe nrite nke mbụ, nke abụọ, nke atọ… Echeghị m na asọmpi a dọtara uche dị ukwuu nwere naanị onye mmeri (Ma o mere Noa obi ụtọ!)
Nov 30, 2007 na 9:42 AM
Oooh mma! Aghọtaghị m mgbe ahụ.
Enwere m olileanya na maka asọmpi gị nke ọzọ, ị ga - eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịbanye. Inwe ndị nkwado 10 maka ide ihe anaghị agba ume. O doro anya na anyị niile chọrọ ntinye ọzọ, mana maka ihe ndị nwere ike ịba uru karịa gị, dịka ịnye gị isi mkpịsị aka gị na SU, ịdenye aha na ndepụta gị, ịme gị na Technorati, wdg.
My uche ezie. 🙂
Feb 21, 2008 n’elekere 11:24 nke abali
Ezi post. Make na-eme ụfọdụ isi ihe dị iche iche nke ọtụtụ mmadụ anaghị aghọtacha.
“Ndo maka ngwụcha ọsọ na nke a! Anyị zigara ndepụta nke ntinye na Ade na ntinye ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ na-enweghị nsogbu metụtara (iji ọrụ RAND na Excel wee dezie kọlụm ahụ). Mgbe ahụ, anyị mere ka Hannes họrọ nọmba na-enweghị usoro n'ime ntinye 108 ka Hannes ghara ịma onye mmeri ga-abụ. Onye mmeri nke ego $ 1,000 bụ Noa na wpstar.com! ”
Ọ masịrị m otu ị kọwara nke ahụ. Nnọọ aka. Daalụ.